accessiBe: कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर कुनै पनि साइट प्रमाणित पहुँचयोग्य बनाउनुहोस् | Martech Zone
accessiBe: कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर कुनै पनि साइट प्रमाणित पहुँचयोग्य बनाउनुहोस्
मंगलवार, मे 31, 2022 मंगलवार, मे 31, 2022 Douglas Karr
जबकि साइट पहुँच को लागी नियमहरु को लागी वर्ष को लागी भएको छ, कम्पनीहरु लाई प्रतिक्रिया गर्न ढिलो भएको छ। म विश्वास गर्दिन कि यो निगमहरूको पक्षमा सहानुभूति वा करुणाको कुरा हो ... म साँच्चै विश्वास गर्छु कि कम्पनीहरू मात्र जारी राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
उदाहरणको रूपमा, Martech Zone यसको पहुँचको लागि खराब श्रेणीमा। समय बित्दै जाँदा, मैले आवश्यक पर्ने कोडिङ, डिजाइन र मेटाडेटा दुवै सुधार गर्न काम गरिरहेको छु... तर म मेरो सामग्रीलाई अद्यावधिक राख्न र नियमित रूपमा प्रकाशन गर्न मात्रै सक्दिनँ। मसँग पहिले नै चाहिने सबै कुराको शीर्षमा राख्नको लागि राजस्व वा कर्मचारीहरू छैनन्... म केवल सक्दो राम्रो गर्दैछु।
मलाई विश्वास लाग्दैन कि म यहाँ अपवाद हुँ... वास्तवमा, जब तपाइँ वेबको विश्लेषण गर्नुहुन्छ र यसको पहुँच मापदण्डहरू अपनाउनुहुन्छ भने संख्याहरू चकित हुन्छन्:
वेबमा शीर्ष मिलियन होमपेजहरूको विश्लेषणले अनुमान गरेको छ कि केवल १ प्रतिशतले व्यापक रूपमा प्रयोग हुने पहुँच स्तरलाई पूरा गर्दछ।
पहुँच के हो? स्तरहरू के हुन्?
वेब सामग्री पहुँच मार्गनिर्देशन (WCAG) अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कसरी डिजिटल सामग्री अझ बढी पहुँचयोग्य बनाउने परिभाषित गर्नुहोस्। पहुँच गर्न असक्षमताको एक विस्तृत श्रृंखला समावेश गर्दछ:
दृश्य असक्षमता - पूरा वा आंशिक अन्धोपन, रंग ब्लाइन्डनेस, र विघुतीय तत्वहरूलाई दृष्टिबाट छुट्याउने क्षमता समावेश गर्दछ।
श्रवण अक्षमता - पूर्ण वा आंशिक बहरापन समावेश गर्दछ।
शारीरिक अशक्तता - एक कुञ्जीपाटी वा माउस जस्तो सामान्य प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उपकरणहरू बाहेक हार्डवेयरको माध्यमबाट डिजिटल माध्यमसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता समावेश गर्दछ।
स्पिच अक्षमता - भाषण मार्फत डिजिटल माध्यमसँग कुराकानी गर्ने क्षमता समावेश गर्दछ। अशक्त मानिससँग बोल्ने अवरोधहरू हुन सक्छन् जुन आधुनिक प्रणालीहरूलाई चुनौती दिन्छ वा बोल्न सक्ने क्षमताको अभाव हुन सक्छ र केही अन्य प्रकारको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको आवश्यक पर्दछ।
संज्ञानात्मक अक्षमता - अवस्था वा कमजोरी जसले व्यक्तिको मानसिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्दछ, स्मृति, ध्यान, वा समझ सहित।
भाषा अक्षमता - दुबै भाषा र साक्षरता चुनौतीहरू समावेश गर्दछ।
अक्षमता सिक्ने - प्रभावी ढ nav्गले नेभिगेट गर्न र जानकारी कायम राख्न क्षमता सामिल गर्दछ।
न्यूरोलॉजिकल अशक्तता - सामग्रीमा नकरात्मक प्रभाव नपारिकन वेबसाईटसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्षमता समावेश गर्दछ। उदाहरणहरू दृश्यहरू हुन सक्छन् जुन दौडहरू ट्रिगर गर्दछ।
के डिजिटल मीडिया मिडिया को घटक अवयव पहुँच?
पहुँच एक घटक होइन, यो फ्रन्ट-एन्ड प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइनहरू र प्रस्तुत गरिएको जानकारीको संयोजन हो:
सामग्री प्रबन्धन प्रणाली - प्लेटफार्महरु प्रयोगकर्ता अनुभव को विकास गर्न को लागी उपयोग गरीयो। यी प्लेटफर्महरू पहुँच विकल्प समायोजित गर्न आवश्यक छ।
सामग्री - वेब पृष्ठ वा वेब अनुप्रयोगमा जानकारी, पाठ, छविहरू, र ध्वनिहरूको साथ साथै कोड वा मार्कअप जसले संरचना र प्रस्तुतीकरण दुवै परिभाषित गर्दछ।
प्रयोगकर्ता-एजेन्टहरू - इन्टरफेस सामग्री को साथ कुराकानी को लागी उपयोग गरीयो। यसले ब्राउजरहरू, अनुप्रयोगहरू, र मिडिया प्लेयरहरू समावेश गर्दछ।
सहायक टेक्नोलोजी - स्क्रीन रिडर, वैकल्पिक कीबोर्ड, स्विच, र स्क्यानि the सफ्टवेयर जुन अशक्तता भएका व्यक्तिले प्रयोगकर्ता एजेन्टसँग अन्तर्क्रियाको लागि प्रयोग गर्दछ।
मूल्यांकन उपकरण - वेब पहुँच मूल्यांकन उपकरणहरू, एचटीएमएल वैधकर्ताहरू, सीएसएस वैधकर्ताहरू, जसले कम्पनीलाई कसरी साइटको पहुँच र कसरी तपाईंको अनुपालनको स्तरमा सुधार ल्याउने बारेमा प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ।
AccessiBe: पहुँच को लागि एआई शामिल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हामीले आशा नगरेको तरिकाहरूमा अधिक र अधिक उपयोगी साबित हुँदैछ ... र पहुँच अब ती मध्ये एक हो। एक्सेसबी दुई अनुप्रयोगहरू जोड्दछ जुन सँगै पूर्ण अनुपालन प्राप्त गर्दछ:
An पहुँच ईन्टरफेस सबै UI र डिजाइन सम्बन्धित समायोजनका लागि।
An एआई-संचालित अधिक जटिल आवश्यकताहरू प्रक्रिया गर्न र ह्यान्डल गर्न पृष्ठभूमि - स्क्रिन-पाठकहरूको लागि अनुकूलन र किबोर्ड नेभिगेसनका लागि।
यहाँ एक सिंहावलोकन भिडियो छ:
बिना एक्सेसबी, वेब पहुँच समाधानको प्रक्रिया मैन्युअल तरिकाले गरिन्छ। यसले हप्ताहरू लिन्छ र हजारौं डलर खर्च गर्दछ। तर म्यानुअल उपचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो यो एक पटक यो समाप्त भएपछि, यो बिस्तार बिग्रिएको हुन्छ ब्राउजर, सीएमएस, र अवश्य, वेबसाइट अद्यावधिकहरूको कारण। महिना भित्र, एक नयाँ परियोजना आवश्यक छ।
संग एक्सेसबी, प्रक्रिया धेरै सजिलो छ:
तपाईंको वेबसाइटमा जाभास्क्रिप्ट कोडको एकल लाइन टाँस्नुहोस्।
पहुँच ईन्टरफेस तुरून्त तपाईको वेबसाइट मा देखा पर्दछ।
एक्सेसबीको एआई तपाईंको वेबसाइट स्क्यान र विश्लेषण शुरू गर्दछ।
Hours 48 घण्टा सम्ममा, तपाईंको वेबसाइट पहुँचयोग्य छ र WCAG २.१, ADA शीर्षक III, सेक्सन 2.1०508, र EAA / EN 301549०१XNUMX XNUMX to लाई अनुरूप छ।
प्रत्येक २ hours घण्टा, एआई नयाँ र संशोधित सामग्री फिक्स गर्न को लागी स्क्यान गर्दछ।
एक वर्षमा हजारौं डलर धेरै चोटि शेलिंग गर्नु भनेको प्राय सबै व्यवसायले खर्च गर्न सक्ने कुरा होइन। वेब पहुँच गर्न सजिलो, किफायती, र लगातार राखिएको बनाएर - एक्सेसबी खेल परिवर्तन गर्दछ।
एक्सेसबी पनि एक प्रदान गर्दछ लिटिगेसन समर्थन प्याकेज कुनै अतिरिक्त लागत बिना, आफ्नो वेबसाइट को अनुपालन चुनौती छ कि मामला मा। तिनीहरूको व्यक्तिगत ध्यानको साथ, प्याकेजले व्यावसायिक लेखा परीक्षा, रिपोर्टहरू, पहुँच म्यापि।, अनुपालन समर्थन गर्ने कागजात, मार्गदर्शन, र अधिक समावेश गर्दछ।
अझै सिक नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: मेरो फर्म Highbridge एउटा हो AccessiBe पार्टनर र हामी यस लेखमा मेरो सम्बद्ध पार्टनर ट्र्याकिङ लिङ्क प्रयोग गर्दैछौं। यदि तपाइँलाई AccessiBe कन्फिगर गर्न र डिप्लोय गर्न सहयोग चाहिन्छ भने, हामी सहयोग गर्न सक्छौं।
टैग: एसिसीबएडीए शीर्षक IIIaiकृत्रिम बुद्धिश्रवण पहुँचश्रवण अक्षमतासंज्ञानात्मक पहुँचतासंज्ञानात्मक अक्षमताभाषा पहुँचताभाषा अक्षमतान्यूरोलॉजिकल पहुँचतान्यूरोलॉजिकल अशक्तताशारीरिक पहुँचशारीरिक अशक्तताखण्ड 508बोली पहुँचबोली अक्षमतादृश्य पहुँचतादृश्य अक्षमताwcagWCAG २.१वेब पहुँचतावेब सामग्री पहुँच मार्गनिर्देशनहरू
Luminar Neo: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गरेर अभिनव छवि सम्पादन
के तपाइँ इन्स्टाग्राम मार्केटिङ गलत गर्दै हुनुहुन्छ? प्रामाणिकता मा फोकस!